Instagram DM amin'ny PC - Ahoana no fomba hijerena sy handefasana hafatra? - Ara-Tsosialy
Instagram DM amin'ny PC - Ahoana no fomba hijerena sy handefasana hafatra?
Anisan'ireo fampiharana haino aman-jery sosialy, ny Instagram dia mitombo hatrany hatrany amin'ny laharana ary lasa tian'ny maro. Izy io dia fampiharana mampihetsi-po tokoa miaraka amin'ny fahaizana mizara horonan-tsary, sary, tantara, ary ankehitriny horonan-tsary IGTV. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mikarakara ny lafiny sosialy ilaina rehetra izay manamora ny fifandraisanao amin'ny olona izany. Toy izany koa, ny safidy DM dia fanampiny mendrika.
Misaotra ny fifandraisan'ny sehatra rehetra, afaka miditra amin'ny Instagram amin'ny PC ianao izao. Na izany aza, mety hiatrika fahasarotana sasany ianao amin'ny fidirana amin'ny safidin'ny hafatra manokana. Ho an'izay dia mitondra torolàlana haingana ho anao izahay. Tsy hanana olana amin'ny fizahana na fandefasana hafatra amin'ny Instagram amin'ny alàlan'ny solo-sainao ianao amin'ireo safidy ireo.
Tari-dàlana Instagram bebe kokoa:
Fafao ny kaonty Instagram
Inona ny DM amin'ny Instagram?
Ny hafatra mivantana dia safidy iray ahafahanao mandefa hafatra manokana amin'ireo mpampiasa ao amin'ny Instagram. Ity fampiasa ity dia mahatonga ny Instagram ho ivon-toerana tsara indrindra hirotsaka amin'ny fiarahamonina. Azonao atao ny maneho hevitra amin'ny sary sy horonan-tsary, mizara tantara na hafatra na mifampiresaka.
Manolotra naoty feo ho an'ny mpampiasa aza izy io, ary afaka mizara sary sy horonantsary manokana amin'ny hafatra mivantana ianao. Raha tsy misy ny messenger amin'ny Instagram, mahatsiaro ho reraka ny mifampiresaka amin'ny olona.
Misy fetrany ve ny hafatra mivantana?
Toa mbola tsy misy safidy ho anao handefasana sora-peo amin'ny PC izao. Saingy afaka mizara sary ianao na miditra amin'ny fakantsarin'ny PC-nao mba hisamborana sary ankehitriny sy hizarana azy ireo. Azonao atao ny mankafy ny hafatra sy ny hafatra avy amin'ny tsirairay. Ankoatr'izay, azonao atao ny mandefa ireo hafatra.
Noho izany, amin'ny ankamaroan'ny lafin-javatra dia mitovy amin'ny rindrambaiko ofisialy misy fameperana io. Na izany aza, azonao atao ny manantena ny Instagram hanakodia fanavaozana amin'ny ho avy izay ahafahanao manao bebe kokoa amin'ny fampiharana. Raha ny fahazoanao ny endri-javatra DM no takinao voalohany, dia manatanteraka tsara izany.
Ahoana no ahafahanao mahazo Instagram amin'ny PC?
Raha te hiditra amin'ny endri-pifandraisana dia mila mampiasa Instagram amin'ny PC ianao. Izahay dia mijery ireo fomba fantatra rehetra hanampiana anao hisafidy ny fomba tsara indrindra mety aminao.
Misy fomba telo fantatra: Browser, App, ary BlueStack. Ny tsirairay amin'ireny dia manome fiasa bebe kokoa sy fampiasana mora kokoa noho ny fomba teo aloha. Safidio izy ireo arakaraka ny zavatra takinao:
Tsy manohana ny Instagram DM ny kinova Browser -
Azonao atao ny miditra amin'ny Instagram amin'ny PC amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny tranonkala Instagram ofisialy. Ampidiro ny taratasinao, ary afaka mampiasa ny ankamaroan'ny baiko ianao. Izy io dia ahafahanao manamarina fahana, tantara ary zavatra hafa rehetra. Iray ihany ny lesoka, ny tsy fisian'ny safidy DM.
Noho izany, tsy ho afaka hiditra amin'ny DM an'ny Instagram ianao amin'ny alàlan'ity safidy ity. Tsy misy azonao atao amin'izany. Ny tsara indrindra azonao atao dia ny mampiasa fanehoan-kevitra hiresahana amin'ny olona na hifaneraserana.
Noho izany, mila misintona ny App amin'ny PC ianao.
Fomba tsara misintona ny fampiharana Instagram amin'ny PC:
Fomba # 1: Ampiasao ny Microsoft App Store
Ny fomba mahomby indrindra amin'ny fahazoana DM ho an'ny Instagram amin'ny PC dia ny fametrahana ny app ofisialy. Azonao atao ny misintona azy avy ao amin'ny Microsoft App Store. Tsy misy vidiny. Maimaimpoana ho an'ny mpampiasa izany. Na izany aza, amin'ny Windows 8 na ambony ihany no azonao anaovana azy. Inona ny fomba?
Mandeha Microsoft App Store ary mikaroha Instagram.
Raiso avy eo ny fampiharana. Ho mandeha ho azy ny fizotry ny fametrahana.
Raha tsy mandeha ho azy dia azonao atao ny manaraka amin'ny fomba tanana ny fizotrany.
Mandrosoa ny fampiharana Instagram amin'ny PC-nao.
Midira amin'ny ID Instagram ofisialy anao na mamorona vaovao.
Raha vao miditra ianao dia afaka mahita ny zana-tsipìka eo amin'ny zoro ambony ambony, mitovy amin'ny fampiharana Instagram ofisialy ho an'ny finday avo lenta. Azonao atao ny manindry azy raha te hahazo hafatra mivantana ianao ary hankafizinao, mitovy amin'ny app an'ny findainao.
Fomba # 1: Mampiasà Bluestacks
Te hankafy Instagram amin'ny fomba tena izy amin'ny findainao ve ianao? Avy eo dia afaka miantehitra amin'ny BlueStacks ianao amin'izany. Io dia Android emulator misy amin'ny PC sehatra. BlueStacks dia manavao ny fampiharana tsirairay ary mampifanaraka azy amin'ny PC. Takiana aminao ny hidiranao amin'ny ID Google anao amin'ny alàlan'ny emulator mba hankafizanao ny sehatra.
Toy izany koa, mila RAM sy hery fanodinana tsara ianao hanohanana ny BlueStacks. Noho ny fomba efa fantany tsara dia mety hisy vokany eo amin'ny zava-bitan'ny rafitrao io. Ny masontsivana amin'ny PC-nao dia hamaritra ny fahombiazan'ny BlueStacks. Ireto misy dingana tokony harahina hahazoana Instagram ao amin'ny Bluestacks for PC:
Ampidiro ao amin'ny tranonkala ofisialy ny BlueStacks fipihana eto .
Mandrosoa ny Bluestacks ary midira ao amin'ny Google ID anao.
Mandehana any amin'ny magazay kilalao ary tadiavo ny Instagram.
Ampidiro ary avy eo manomboka.
Midira ao amin'ny ID Instagram anao.
Ankehitriny ianao dia afaka mankafy ilay fampiharana mitovy amin'ny tianao amin'ny telefaona.
Ny kinova BlueStacks dia mitondra anao safidy safidin'ny feo, ankoatry ny hafa ho an'ny PC. Raha misy ifandraisany, raha manana PC specs ambany ianao, dia mety tsy hamaly na tara loatra loatra amin'izay azonao ampiasaina amin'ny fomba mety. Noho izany, izay fomba tokony hofidinao dia miankina amin'ny safidinao sy ny takinao.
Aza avela hisy na inona na inona manakana anao tsy hiditra amin'ireo endriny feno amin'ny fampiharana sosialy malaza. Miasa tsy tapaka ny Instagram hitondra anao ny traikefan'ny mpampiasa tsara indrindra. Androany, nanjary nihanaka erak'izao tontolo izao izany. Afaka mahita olona ianao izao na dia amin'ny alàlan'ny fampahalalana momba anao aza ao amin'ny Instagram. Ny hany ilainao dia ny kaonty sy teny miafinao hidirana amin'ny Instagram. Raha mampiasa PC an'ny olon-kafa ianao dia alao antoka fa hivoaka alohan'ny handehananao.
Manandrana ny tsara indrindra vitany i Windows mba hitondrana anao traikefa Instagram feno, saingy maharitra fotoana kely izany. Mandra-pahatongan'izany, afaka mampiasa ireo fomba voalaza etsy ambony ianao ary mankafy ny fampiasa amin'ny fandefasan-kafatra Instagram sy ny safidy hafa amin'ny solosainao.
Ahoana ny fomba filalaovana PUBG Mobile amin'ny PC?
Zoom ho an'ny Windows 10
Inona no jerena amin'ny Hulu? Ultimate Collection (2020)
Lalao toa ny PUBG - Top 4 alternatives
safidy hafa ankoatry ny tv cable
roblox player.exe hampandeha ny installer roblox
ahoana ny fanamafisan'ny spotify ny mpianatra
avia maka ny fahitalavitra maimaim-poana
boaty android tsara indrindra eny an-tsena